Egwuregwu Ndị Nwere Ike Ịta Isi Mmadụ Ọ̀ Dị Mma?
ISIOKWU TETA! A Ọdachi Mee Olee Ihe Ndị Nwere Ike Ịzọ Anyị Ndụ?
Otú Anyị Ga-esi Ghara Ịna-emefusi Ikike Eletrik na Mmanụ Ụgbọala
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Egwuregwu Ndị Nwere Ike Ịta Isi Mmadụ Ọ̀ Dị Mma?
LANDS AND PEOPLES Mgbe M Gara Kazakstan
WAS IT DESIGNED? Mkpokoro Eju Mmiri na Ihe Ndị Ọzọ Yiri Eju Bi ná Mmiri
Gịnị Mere Unu Anaghị Aga Agha?
Teta! | Nke 5 n'Afọ 2017
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
IHE MERE ỤFỌDỤ JI EME YA
Otu nwa okorobịa aha ya bụ Leon kwuru, sị: “M gara kwụrụ n’akụkụ ụgbọ okporo ígwè na-agba oké ọsọ n’okpuru ala. Ụdị akpata oyi wụrụ m n’ahụ́ mere ka ọ dị m ka mụ enweghịzi nsogbu ọ bụla.” *
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Larissa, kwuru sị: “Mgbe ọ bụla m si n’ọnụ ọnụ ugwu maba n’ime mmiri, ahụ́ na-ada m jii. Ime ihe a na-atọ m ụtọ, ma, ọ na-atụkwa m ụjọ mgbe ụfọdụ.”
Dị ka Leon na Larissa, ọtụtụ ndị na-eto eto na-enwetakarị obi ụtọ pụrụ iche ma ha mee ihe ndị nwere ike ịta isi ha. Ọ̀ na-agụ gị agụụ iso mee ụdị ihe ndị a? Ọ bụrụ otú ahụ, ihe ndị e kwuru n’isiokwu a ga-abara gị uru.
Igwu ụdị egwuregwu a nwere ike ịmara mmadụ ahụ́. Otú o si na-atọ gị ụtọ nwere ike ime ka ịchọwa imekwu ya. Otu nwa okorobịa aha ya bụ Marco, onye gara nọrọ n’akụkụ ụgbọ okporo ígwè, otú ahụ Leon mere, kwuru, sị: “O siiri m ike ịkwụsị ime ya. Obi ụtọ m na-enweta na ya na-eme ka m chọwa nke ka ya m ga-eme.”
Otu nwa okorobịa aha ya bụ Justin na-eyiri akpụkpọ ụkwụ nwere taya, jide ụgbọala na-agba ọsọ aka, soro ya na-aga. O kwuru, sị: “Otú ime ihe a si atọ m ụtọ na-eme ka m na-achọkwu ime ya. M chọrọ ka ndị mmadụ na-eto m. Ma, m mechara nweta onwe m n’ụlọ ọgwụ.”
Ịchọ ime ka ndị ọgbọ gị nabata gị nwere ike ime ka i chefuo onwe gị. Otu nwa okorobịa aha ya bụ Marvin kwuru, sị: “Ndị enyi m nyere m nsogbu ka m jiri aka rịa ahụ́ ụlọ otu ụlọ elu toro ogologo. Ha nọ na-asị m: ‘Rịwa, rịwa, ị ga-emeli ya.’ Ọ kachaghị m obi. M nọkwa na-ama jijiji mgbe m bidoro ịrị ya.” Larissa anyị kwuburu gbasara ya ná mmalite kwuru, sị: “M na-eso ndị ọzọ eme ihe ọ bụla ha na-eme.”
Ụfọdụ ndị chọrọ ito ndị na-eme ụdị ihe a ma kpalie ndị ọzọ ime ya, na-etinye vidio na ihe ndị ọzọ ga-eme ka ọ yie ihe na-adịghị ize ndụ n’Ịntanet. N’ihi otú ọtụtụ ndị si ele vidio ndị ahụ, ndị na-eme ya ghọziri ndị ama ama.
Di ka ihe atụ, e nwere ụfọdụ vidio na-egosi ebe ndị mmadụ na-amagharị n’elu mgbidi, ụlọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nwere ike ịta isi mmadụ. Ha na-enwe ike isi n’elu otu ihe mafere n’ọzọ n’ejideghị ihe ọ bụla aka. Ile vidio ndị a nwere ike ime ka mmadụ chewe na: (1) Ọghọm adịchaghị na ya, na (2) Onye ọ bụla na-eme ya. Ihe ga-esizi n’ime ya pụta bụ na: O nwere ike gụwa gị agụụ ka i mee ihe ndị ahụ nwere ike ịta isi mmadụ.
E nwere otú kacha mma mmadụ nwere ike isi mata ebe ike ya ruru. Baịbụl kwuru, sị: “Ọzụzụ nke ahụ́ bara ntakịrị uru.” (1 Timoti 4:⁠8) Ma, ọ gwakwara gị ka ị “na-ebikwa ndụ n’uche zuru okè.” (Taịtọs 2:12) Olee otú i nwere ike isi mee ya?
Leba anya ná nsogbu ndị dị na ya. Baịbụl kwuru, sị: “Onye ọ bụla nke maara ihe ga-eji ihe ọmụma mee ihe, ma onye nzuzu ga-agbasa nzuzu ya ebe niile.” (Ilu 13:16) Tupu gị emee ihe ọ bụla, buru ụzọ chọpụta ọghọm dị n’ihe ahụ. Jụọ onwe gị, sị, ‘Ihe a m chọrọ ime ò nwere ike ịkpatara m ọnwụ ma ọ bụ mmerụ ahụ́?’​—⁠Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 14:⁠15.
Meta ndị ji ndụ kpọrọ ihe enyi. Ezigbo ndị enyi agaghị agba gị ume ka i mee ihe nwere ike igbu gị ma ọ bụ ihe ị na-achọghị ime. Larissa kwuru, sị: “Ezigbo ndị enyi nyeere m aka ịhọrọ egwuregwu ndị na-adịghị ize ndụ. Ndị enyi m nwere ugbu a mere ka ndụ m ka mma.”​—⁠Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 13:⁠20.
Jụọ onwe gị, sị, ‘Ihe a m chọrọ ime ò nwere ike ịkpatara m ọnwụ ma ọ bụ mee ka m merụọ ahụ́?’
Otú ị ga-esi mee ihe ndị na-amasị gị n’emerụghị ahụ́. Otu akwụkwọ aha ya bụ Adolescent Risk Behaviors kwuru na mmadụ na-eto, ọ “na-amụtakwu ihe ndị o kwesịrị ime na ebe ike ya ruru.” Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ebe ike gị ruru, jiri ihe ndị ga-egbochi mmerụ ahụ́ mee ya.
Ka obi na-atọ gị ụtọ n’ihe ndị ị ga-emeli. Ihe ga-eme ka ndị mmadụ na-akwanyere gị ùgwù abụghị ihe i mere ka ndị ọzọ hụ gị, kama, otú i si emeri nsogbu ndị i nwere. Larissa kwuru, sị: “Isi n’ọnụ ọnụ ugwu maba n’ime mmiri bụ ihe mbụ nwere ike ịta isi mmadụ m mere. Ọ gaara akacha mma ma a sị na m jụrụ ime ihe ndị ahụ.”
Ihe ị ga-eburu n’obi: Kama itinye aka n’egwuregwu ndị nwere ike ịta isi gị, i nwere ike ịhọrọ egwuregwu ndị na-agaghị akpatara gị nsogbu.”​—⁠Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 15:24.
““Onye maara ihe na-echebara nzọụkwụ ya echiche.”​—⁠Ilu 14:15.
“Onye ya na ndị maara ihe na-eje ije ga-ama ihe.”​—⁠Ilu 13:⁠20.
“Ụzọ nke ndụ dị n’ebe dị elu n’anya onye ji nghọta eme ihe, ka o wee ghara ịbanye na Shiol nke dị n’okpuru.”​—⁠Ilu 15:⁠24.
“I kwesịrị ịgbalị mata ihe ndị nwere ike ịta isi mmadụ n’egwuregwu ahụ na-amasị gị. A si kwuwe, o nweghị onye na-eto eto ga-achọ ịda ngwọrọ.”
“Ọ bụrụ na ndị enyi gị agawa ime ihe ị na-achọghị ime, esola ha. Ị nwaa anwaa soro ha ruo ebe ahụ, ọ ga-esiri gị ike ịghara ime ihe ahụ.”
Nke 5 n'Afọ 2017 | Ọdachi Mee, Olee Ihe Ndị Nwere Ike Ịzọ Anyị Ndụ?
TETA! Nke 5 n'Afọ 2017 | Ọdachi Mee, Olee Ihe Ndị Nwere Ike Ịzọ Anyị Ndụ?